Geofeedia: Nlekota oru banyere ndi mmadu, ihe omuma na nyocha site na ebe | Martech Zone
Geofeedia: Nyochaa Social Media, ọgụgụ isi na nyocha site na Ọnọdụ
Saturday, January 24, 2015 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Geofeedia bụ usoro eji eme ihe nke ọma nke ndị ahịa nwere ike iji nyochaa na nyochaa mgbasa ozi mgbasa ozi dabere na ọnọdụ. Nke a nwere ike bụrụ usoro ahịa ahịa bara ezigbo uru maka njikwa aha, ma ọ bụ maka usoro nnweta. Ikekwe ị bụ onye na-eweta ọrụ ma ọ bụ nwee ọtụtụ ndị nnọchi anya ọrụ na mpaghara ụfọdụ - ị nwere ike inyocha usoro mgbasa ozi mmekọrịta ọ bụla maka aha ma ọ bụ maka ndị ahịa ị na-achọ enyemaka.
Key Geofeedia Atụmatụ na Uru
Nyochaa - Chịkọta ma debe ọdịnaya mgbasa ozi mmekọrịta na mpaghara mpaghara akọwapụtara.
Iyo - Dozie nsonaazụ ọchụchọ site na isiokwu, onye ọrụ, ụbọchị, oge awa, isi mmalite mgbasa ozi na ndị ọzọ.
Hụ anya - Map anya na-egosi kpọmkwem ọnọdụ nke ọdịnaya gị, nchịkọta echiche na-egosi gị usoro iheomume na usoro nke posts na ndụ gụgharia ngosipụta ọhụrụ ọdịnaya na ozugbo si otutu ebe na otu ihuenyo.
Tụlee - Enwere m data iji chọpụta usoro isiokwu, ọrụ dabere na oge, akwụkwọ mmado ndị na-akpa ike, usoro ọrụ, usoro mgbasa ozi mmekọrịta na ndị ọzọ
Archive - Chekwaa data gị na igwe ojii nke dabeere na igwe ojii maka iweghachite na nyocha n'ọdịnihu.
Export - Geofeedia na-enye API zuru oke, mbupụ CSV, wijetị embeddable na mbupụ data RSS na usoro ATOM, GeoRSS ma ọ bụ JSON.
mata - Anata akpaka email alerts na ozugbo dabere na ụfọdụ isiokwu ma ọ bụ na aha njirimara triggers.
Ịsụgharị - Sụgharịa nsonaazụ ọchụchọ ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asụsụ ọ bụla site na iji otu ịpị.
Mepụta Omenala Oke maka Social Media Query
Lelee ajuju ndi edere na Social Media site na Collage
Nyochaa Social Media-based Location
RTS - Ileba Anya
RTS - Nchịkọta
Ndekọ nchịkọta & mmetụta
Ndị na - emetụta ya - Echiche Collage
Iji mụtakwuo maka ịchọta ọdịdị ala, budata akwụkwọ akụkọ ha, "The Geosocial Marketer's Roadmap", taa.
Budata Roadmap nke Geosocial Marketer
Tags: Archive na-elekọta mmadụ mediageogeofeediaalaihe odide mgbasa ozi nke ndi mmadugisnyochaa ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụọgụgụ isi na-elekọta mmadụ media dabeere na ọnọdụmgbasa ozi mgbasa ozielekọta mmadụ media faili ntanetịimeọgụgụ isi mgbasa ozinlekota oru mgbasa ozi
Ghọta Olee Payaa Kwa Pịa enyere gị Organic Search
PollSnack: Mepụta Mkpebi Mfe, Nkọwa ahaziri na Facebook